Izicwangciso zokutya zosuku ezisi-7 ezinee-carb eziphantsi -
Izicwangciso zokutya zinokuba luncedo kakhulu, kodwa kude kube ngoku, khange sibe nesicwangciso sokutya se-carb eziphantsi ukuze sabelane nawe. Namhlanje, oko kutshintshiwe! Ngoku unokukhetha phakathi kwesicwangciso sokutya esilinganiselweyo kwiPick n Pay, izicwangciso zokutya ezintlanu ezisempilweni ezivela eSanofi (kubandakanya imifuno, ezemali ephantsi mali kunye neIndiya) kunye nezi zicwangciso ezibini zokutya zecarb eziphantsi kwiZicwangciso zokutya zeentsuku ezisixhenxe zeBanting. Kukho icebo lomntu wonke!
Nazi izicwangciso zokutya ezimbini zecarb eziphantsi onokukhetha kuzo: isicwangciso sokutya seentsuku ezisixhenxe, kunye nohlahlo-lwabiwo mali lwesicwangciso sokutya seentsuku ezisixhenxe. Cofa kwikhonkco elingezantsi komfanekiso ngamnye ukukhuphela. Fumana ngakumbi malunga nendlela elula yokutya i-carb ephantsi kunye nengxoxo ephantsi ye-carb-fat-protein diet, kwaye ujonge indlela yokubeka isitokhwe se-carb esezantsi.
Izidlo esineecarb eziphantsi sentsuku ezisi-7
Izidlo ezinesitatshi esiphantsi sentsuku ezisi-7Download
Isicwangciso zezidlo zemali efikekelelekayo
Dawunilowda izicwangciso zezidlo zemali efikekelelekayoDownload
Amacebo ebanting omtu wonke
Ezi zicwangciso zokutya zivela kwincwadi yesiCwangciso sokutya seNtsuku ezi-7: iindlela zokupheka ezili-100 zamalungu eqela eli-1.7 lezigidi. Inika ukubetha uhlahlo-lwabiwo mali, izicwangciso zokutya, iingcebiso kunye namaqhinga.
Akubhalwanga ngoososayensi, oogqirha okanye izondlo kodwa ngabantu abathathu abaye bathatha isigqibo sokubuyisa impilo yabo. Baqhuba i-Banting yentsuku ezisi-7 kwiqela leFacebook, enabalandeli abangaphezu kwezigidi ezi-2.3-elona qela likhulu lokutya emhlabeni kwi-Facebook.